Global Voices teny Malagasy · 1 Oktobra 2018
01 Oktobra 2018
Tantara tamin'ny 01 Oktobra 2018
Afrika Mainty01 Oktobra 2018
Amerika Latina01 Oktobra 2018
Tao anatin'ny herinandro vitsy, nitatitra betsaka ny fanjavonan'ny fianakaviana Pomar ny fampitam-baovao ao Arzantina. Ny 14 Novambra 2009, nandeha fiara nankany Pergamino, 220 kilometatra miala an'i Buenos Aires i Fernando Pomar, ny vadiny Gabriela Viagrán, ary ny zanany roa vavy Candelaria sy Pilar ary nanjavona rehefa nandalo lalana handoavana hetra.
Però: Korontana taorian'ny horohorontany
Niteraka hetsika marobe teo amin'ireo bilaogera Peroviana ny horohorontany goavana vao haingana izay namely an'i Però. Ny sasany nanoratra sy nanadihady ny zavatra tsapan'izy ireo tamin'ny fisian'ny horohorontany, raha nikasa hampahafantatra ny namana Peroviana kosa ny hafa mba hiaro azy ireo amin'ny fampahalalam-baovao diso.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana01 Oktobra 2018
Azia Atsimo01 Oktobra 2018
Maty novonoin'ny LTTE ny parlemantera ambony iray sady iray amin'ireo minisitra manan-danja indrindra tao amin'ity governemanta ankehitriny. Heverina fa nanafin-tava ho toy ny mpihazakazaka amin'ny Marathon ilay mpidaroka baomba. Manome vaovao farany fohy momba ny tranga ny DefenseNet saingy niteraka adihevitra mafana ilay lahatsoratra.